Talooyin Ku Saabsan Naqshad Ku Saabsan Sidii looga saari lahaa Domain Multiple iyo Spammers Referral ka Google Analytics Isticmaalkeeda
Dunida Suuq-geynta Dijital ah , gaadiidka gudaha, nacaybka, iyo spamerka gudbinta ayaa halis dhab ah u galay ururrada yaryar. Calaamadaha ganacsatada waxay ku shaqeeyaan ganacsiyada internetka iyagoo leh ujeedo gaar ah oo lagu gaari karo soo celinta badan ee mustaqbalka fog. Si kastaba ha ahaatee, riyadooda ayaa la xiray fayruusta Trojan, nacaybka, iyo tarjumada been-abuurka ah ee loo gooyo boggooda iyaga by spammers. Soo bandhigidda tirooyinka buuxa ee gaadiidka gudaha iyo kuwa been abuurka ah ayaa noqon kara buuqa sida
Nik Chaykovskiy, oo ah Semalt Maareeyaha Guusha Macaamiilka, ayaa sheegay in qaababka iyo farsamooyinka kala duwan loo soo bandhigay si ay u caawiyaan suuqyada iyo milkiilayaasha boggaga ah inay la dagaallamaan oo ay sifeeyaan spam u gudbinta Google Analytics - grain smart. Marka laga reebo domiyo badan oo ka tiran tirakoobyadaada iyo warbixintaada waxay noqdeen mid ka mid ah hawlaha sahlan ee lagu fulin karo goobaha internetka. Si kastaba ha ahaatee, feejignaanta iyo hirgelinta habboon waxaa looga baahan yahay in ay farsamooyinka u shaqeeyaan website-kaaga.
Isticmaalka shaandhada caadada ah si aad uga saarto xayndaab badan oo ka timid warbixintaada
Qaar ka mid ah tibaaxyada joogtada ah ayaa lagu taageeraa shaandhada gaarka ah. Marka ay timaado in lagu daro domiyo badan iyadoo la adeegsanayo filtarrada halbeegga ah, beddelidda habka aad u shaqeyneysid filtarrada horay loo soocay si ay u noqdaan shaandhada gaarka ah waa xulashada ugu fiican. Horaantii, milkiilayaasha bogagga ayaa sheekooyin ku saabsan sida ay u adagtahay in ay xayiriso xayndaabyo badan oo sii waday inay ku soo baxaan warbixintaada daqiiqad kasta..
Sida loo soocayo spammers ee ku xusan tirakoobka Google Analytics
Ku dar magac shaashad ah una sheeg sida aad jeceshahay. Tusaale ahaan, "Spam sites."
Ku dar nooc filti ah. Xaaladeena, waxaan la shaqeyn karnaa "Custom" filter
Waxaad abuurtaa badhanka "Ka saar"
Ku darso badeecad qalinjabin ah. "Gudbinta" ayaa ah kan ugu aqbala kiiskan
Hirgelinta qaabka filter-ka
Riix badhanka "Codso Sawirada". Codso shaashadda dhammaan xogta bogagga
Spammer spammers waxay u muuqdaan in ay labajibaarayaan tirada dadka booqdayaasha ah ee ku jira goobtaada mar kasta oo aad eegto tirakoobyada Google Analytics. Qaadashada spammers, cambaareeyaha, fayraska Trojan, iyo hanjabaadaha kale ee goobta Google Analytics ma caawineyso wax badan.
Si looga fogaado in dhibanaha spammers iyo taraafikada gudaha dhexdiisa dhibsado, ku rakib WordPress WordPress on aad PC oo aad dib u cusbooneysiiso. Kiisaska intooda badan, booqashada goobaha aan la aqoon waxay kuu keenayaan inaad is-casilaan iyo u nuglaanta xayawaanka, iska ilaali booqashada boggaga haddii aadan isticmaalin boodhadhyada qoraalka. Farsamooyin kale ayaa la dhigay si loo xakameeyo lafdhabarta ghost ee laga soo galo iyo in la xakameeyo goobtaada. Sida laga soo xigtay khabiirada, spammers ama gawaarida qaylo-dhaanta waxay u egtahay in ay isticmaalaan marti-beenada been abuurka ah si ay u galaan ama u booqdaan goobtaada. Abuurista filtarka martida ee ansax ah oo kaliya maaha xayeysiiyayaal saameeya boggaaga internetka laakiin sidoo kale wuxuu ka ilaaliyaa hanjabaad iyo nacfi khatar ah oo saameynaya goobtaada.
Iyadoo laga helayo tirakoobyada Google Analytic oo ka madax bannaan luuqadaha gudbinta iyo gaadiidka gudaha ayaa u baahan feejignaan badan. Uma baahnid inaad sii wadatid santuuqyo aan dhammeystirnayn si aad u xakamayso koodhadhka xaasidnimo iyo xawaaraha gudbinta. Ku darista feylka martida ee ansaxsan wuxuu ka reeban yahay domains badan iyo kermaawayaashu isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan ​​ammaanka internetka. Spamer Referrer ayaa ka soo baxday xakamaynta waxayna qaadatay waqti badan iyo lacag.